Home » Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny » Hilton, Marriott ary G6 Hospitality dia manambara ny fivoaran'ny hotely any Honduras
Ny fitomboan'ny lazan'ny Honduras amin'ny maha fizahantany sy toerana fampiasam-bola azy dia nanjary fanitarana vao haingana avy amin'ny olom-pirenena maro toa an'i Hilton, izay vondrona hotely farany manambara fandrosoana ho avy any amin'ity firenena Amerikana Afovoany ity.
Tamin'ny volana lasa teo, nanambara ny fanaovan-tsonia fifanarahana fitantanana niaraka tamin'i Desarrolladores Asociados de Honduras (DAH) i Hilton hanatanterahana trano fandraisam-bahinin'ny hotely Garden Garden Inn 173 any Tegucigalpa. Voalahatra hisokatra amin'ny 2021, ny hotely hampahafantatra ny Hilton Garden Inn, hotely ambony sy lafo vidy ao amin'ny Hilton, ho an'ny renivohitra sy tanàna lehibe indrindra ao amin'ny firenena.
Hilton Garden Inn Tegucigalpa dia hamorona ampahany amin'ny sarotra ampiasaina izay hipetrahan'ny Real De Minas Mall, toerana misy ny birao ary safidy fialamboly. Any amin'ny 7.5 kilaometatra avy eo amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Toncontín no misy ny hotely miorina eo amin'ny Boulevard Juan Pablo II eo afovoan-tanàna, akaikin'ny orinasa lehibe sy ny fizahan-tany fizahan-tany, toy ny afovoan-tanàna manan-tantara sy ny lapan'ny filoham-pirenena. Ny Hilton Garden Inn Tegucigalpa no fananana fananana Hilton fahatelo ao Honduras aorian'ny Hilton Princess any San Pedro Sula, izay nosokafana tamin'ny 12, ary ny Indura Beach & Golf Resort Curio Collection nataon'i Hilton, any amin'ny morontsiraka avaratry ny Tela Bay, izay nanatevin-daharana an'i Hilton's portfolio amin'ny 2006.
Tsy i Hilton irery no gadona hotely lehibe nanambara ny fanombohana na fanitarana ny fisiany ao Honduras. Ny G6 Hospitality dia nanao sonia fifanarahana fampandrosoana tamin'ny faran'ny volana Janoary niaraka tamin'ny InterAmerican Development Group, Inc. (IADG) hitondrana trano Motel 6 na Studio 6 any Honduras ao anatin'ny dimy taona manaraka, ary mitentina 4.5 tapitrisa dolara amerikana.
Nanambara ny Marriott International fa hanokatra ny tokotaniny ao an-tokontany voalohany misy ny trano Marriott ao San Pedro Sula, Honduras amin'ny taona 2018. Ity no trano fandraisam-bahiny faharoa an'ny portfolio ao aorian'ny Hotely Tegucigalpa Marriott, vitsivitsy monja amin'ireo tranon'ny filoham-pirenena. Any amin'ny afovoan-tanànan'i Rio de Piedras, ny Couryard by Marriott San Pedro Sula dia hamela ny fidirana mora mankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Ramón Villeda Morales sy ireo toerana fizahan-tany lehibe toy ny Museum of Anthropology.
Ho fanampin'ny Hilton sy Marriott, ireo vondrona hotely toy ny InterContinental Hotels Group, Hyatt Corporation, La Quinta Inns & Suites ary Choice Hotels (CHH) dia efa teo amin'ny faritra malalaky ny renivohitra sy ny toeram-pialan-tsasatra ao Honduras, izay mahatonga ny firenena ho safidy manintona hatrany ho an'ireo fianakaviana mitady toerana fitsangatsanganana vaovao, mpandraharaha mitady tombontsoa amin'ny famatsiam-bola vaovao na mpitsangatsangana maniry ny hankafy ireo zava-mahatalanjona voajanahary ao Honduras.
• Vondron-Hotely InterContinental: Ny Holiday Inn Express Tegucigalpa dia miorina eo afovoan'ny distrika ara-bola sy ara-barotra vaovao ary iray kilaometatra miala ny Metropolis Business Tower, raha ny Holiday Inn Express San Pedro Sula dia minitra vitsy monja amin'ireo orinasa toa an'i Unilever ary Imvesa, Global Agency ary Banco de Occidente. Na ny Real InterContinental Tegucigalpa na ny Real InterContinental San Pedro Sula dia samy lavitra ny halaviran'ny distrika fialamboly sy ara-bola manokana an'ny tanànany avy. Ny Crowne Plaza San Pedro Sula avo lenta dia manome ny mpitsidika ny sasany amin'ireo fomba fijery mahavariana indrindra eto an-tanàna.
• Hyatt Corporation: Hyatt Place Tegucigalpa dia manome safidy ho an'ny mpandeha raharaham-barotra safidy tsara nefa sariaka. Any amin'ny Los Próceres Commercial Park, anisan'ireo faritra manintona sy malaza indrindra eto an-tanàna, dia manana hambom-pozika koa io hotely io.
• La Quinta Inns & Suites: ny Hotel LQ Tegucigalpa, hotely maoderina iray 2.5 kilometatra miala ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Toncontín ary akaikin'ny ivontoerana fiantsenana Cascadas vaovao ao an-tanàna, dia safidy afovoany sy mora vidy ho an'ireo mpitsidika mandeha any an-drenivohitr'i Honduras. La Quinta Inns & Suites dia mitantana trano any San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca ary Comayagua.
• Hotely safidy: Any amin'ny Honduras rehetra, hotely Choice no miasa amin'ny hotely Clarion any Copán, Roatán, San Pedro Sula ary Tegucigalpa, izay manome safidy trano hipetrahana ho an'ny mpivarotra sy ny mpanao fialantsasatra.
TOURISME AO HONDURAS
Honduras dia manolotra morontsiraka madio, ala tropikaly, tanàna fanjanahan-tany ary toerana arkeolojika alohan'ny Hispanika, ahafahan'ny mpitsangatsangana amin'ny karazany rehetra mahita zavatra tiany.
Miorina ao Karaiba ary manamorona ny Mesoamerican Barrier Reef, rafitra haran-dranomasina faharoa lehibe indrindra manerantany, ny Nosy Bay dia ao anatin'ny fisintahana fizahan-tany manan-danja indrindra any Honduras, nahazo loka ho an'ny fitahirizana ny morontsiraka, toerana antsitrika, seranana ary toerana tsara indrindra eto an-tany hisotro ronono. Ireo nosy dia isan'ny toerana vitsivitsy eto an-tany ahafahan'ny mpandeha milomano miaraka amin'ny trondro lehibe indrindra eto an-tany, ny antsantsa trozona.
Miaraka amin'ny faritra arovana sy valan-javaboary 91 miisa 27 isan-jaton'ny faritry ny firenena, i Honduras dia manakaiky ny natiora ireo mpitsidika. Ny Pico Bonito sy ny valan-javaboary Celaque dia manome fialokalofana vanim-potoana na maharitra ho an'ny karazam-borona 750 hafa. Ny firenena dia fonenan'ny Reserve de Biosfirst Río Plátano, toerana iray vakoka UNESCO; Lancetilla Botanical Gardens, zaridaina botanika faharoa lehibe indrindra eto an-tany; ny velarana midadasika indrindra amin'ny ala tropikaly any avaratry ny ekoatera; ary ny tampon'ny tendrombohitra avo indrindra any Amerika Afovoany, tafakatra hatramin'ny 9350 metatra. Honduras koa dia tanjon'ny rafting sokajy manerantany, miaraka amin'ny Rio Cangrejal, iray amin'ireo renirano malaza indrindra any Amerika Afovoany, manolotra rapide Class II ka hatramin'ny IV amin'ny làlany 2,849-kilometatra avy amin'ny Pico Bonito National Park mankany Karaiba.
Honduras dia mitahiry fanomezana arkeolojika sy manan-tantara isan-karazany toy ny toerana arkeolojika Maya any Copán, toerana iray vakoka UNESCO. Ny tanànan'ny mpanjanatany Espaniôla ao Gracias sy Comayagua dia anisan'ny mahaliana indrindra any Amerika Latina, miaraka amina fiangonana voatahiry tsara sy tranobe manan-tantara hafa. Ny Garifuna, taranaky ny andevo afrikanina monina ao amin'ny morontsirak'i Honduras 'Karaiba, dia mitahiry am-pireharehana ny fomba amam-panao nentin-drazana.